China Backpack T-B3985 fanamboarana sy orinasa | TIGERNU
TIGERNU - Tonga vaovao Ririnina 2020 Ilay Lehilahy
Kompartitra maro voalamina: Kitapo solosaina Tigernu miaraka amin'ny efitranon'ny solosaina finday hatramin'ny 15.6 Inch, efamira 6 voalamina ho an'ny solosaina findainao, iPad, telefaona, penina, fanalahidy, boky, akanjo, tavoahangy rano ary maro hafa, mahatonga ny entanao ho voalamina, mora tadiavo izay tadiavinao.
Ny fiarovana: ny kitapom-batsy misy kitapo misy kitapo fanoherana miafina ao an-damosina dia miaro ireo entana sarinao amin'ny mpangalatra. Zipper dia azo hidiana amin'ny hidin-trano, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny olona mangalatra ny entanao ianao. Miambina tsara ny entanao!
Mahazo aina sy mora: Tigernu dia kitapom-batsy Laptop miaraka amina foam milomano mifono tsara ao an-damosinao. Ny ergonomika sy ny fehin-kibo mahitsy miendrika S dia manamaivana ny adin-tsoroka. Ny fehin-kibo efa voafehy tsara dia mety aminao raha manamboatra ny kitapo finday eo amin'ny valizinao, manao izay hahamety kokoa ny dianao sy ny fitsangatsanganana amin'izay alehanao rehetra. fotoana.
Fitaovana maharitra: kitapo laptop Tigernu bizina vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba mateza splash & gorodona ary zipper tsy mahazaka rano izay mahatonga ny kitapo maharitra sy mitazona ny zavatra ho maina rehefa avy orana. Sariaka tontolo iainana ny materialy, aza manimba ny fahasalamanao.
Tigernu kitapom-batsy dia mety tsara amin'ny orinasa, dia lavitra, hetsika ivelany, sekoly.
Laharana maodely T-B3985
Loko: Mainty / Volomparasy / Volondavenona / Volondavenona / Mena mena
Habe: 29 * 42 * 16cm
Teo aloha: Kitapo crossboy T-S8113
Manaraka: Kitapo crossbody T-L5191
kitapo fanoherana ny halatra